ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအထည်အလိပ်စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ - Zhuji Feihu ချည်မျှင်စက် Co. ,, Ltd မှ
စက်တွေကိုသူတို့လှပသောကြောင့်ကိုးကွယ်တန်ဖိုးနဲ့သူတို့အာဏာကိုအပ်နှင်းထားပါသည်; သူတို့ slavery.Though စည်းကြပ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကပထမဦးဆုံးအကြိုးတစ်စိုးရိမ်များ၏အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်တစ်ဦးဖိအားကြောင်းစွမ်းအင်သို့မဟုတ်လောင်စာလောင်ယခုရက်အတွင်းအကျည်းတန်နှင့်ကိုရွံ့ကြောင့်သူတို့မုန်း. ကျနော်တို့စက်တွေကိုကြိုက်သို့မဟုတ်မရှိမရှိ, စက်တွေစက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများအတွက်မဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်အသုံးပြုနိုင်သည်. ဒါကြောင့်မည်သည့်တိုင်းပြည်စီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှုဦးဆောင်သောစက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏သင်္ကေတနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်မျိုးဆက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖွင့်. လက်ရှိအစီရင်ခံစာများဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အတွက်မြို့တော်စက်ပစ္စည်းတင်သွင်းအကြီးအကျယ်နှေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းကြောင်းသစ်ညွှန်ပြသောဤဘဏ္ဍာရေးနှစ်ပထမတဆယ်လအတွင်းကဆင်းသွားပြီကြောင်းပြသကြ. ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အတွက်ယေဘုယျအားအထည်အလိပ်စက်ယန္တရားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းကြောင်းသစ် Bangladesh'under အတွက်ခေါင်းစဉ်ကို '' ချည်မျှင်စက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Trends အတွက်ယခင် BTT ပြဿနာများ၏အဖုံးဇာတ်လမ်းကိုပုံဖော်ခဲ့သည် (ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2013).ယခင်ဆောင်းပါး၏အဓိကနိဂုံးချုပ်မှတ်ချက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများကိုလေ့လာဆနျးစရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအလားအလာများအတွက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အရိပ်အယောင်ဓာတ်ငွေ့များကဲ့သို့ Bangladesh.Public utility ကိုပြဿနာတံခါးတွင်တည်ရှိသည်ခဲ့သော်လည်း & လျှပ်စစ်မီးမလုံလောက်မှုထိုနေ့ရက်ကာလရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေများအတွက် key ကိုအကြောင်းပြချက်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့တင်သွင်းမှုမြှင့်သို့မဟုတ်ကျဆင်းကျနော်တို့အထည်အလိပ်စက်ယန္တရားများတင်သွင်းမှုအပေါ်အပြည့်အဝမှီခိုနေကြ. ဒီစက်အပိုဒ် Fiestaat BTT ၌ဤကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အထည်အလိပ်များအတွက်စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူအပေါ်အခြားစီးရီးနှင့်တကွကြွလာ & RMG စက်မှုလုပ်ငန်း. ဤဇတ်လမ်းဖေဖော်ဝါရီလဖုံးပုံပြင်နှင့်ဤအဖုံးဇာတ်လမ်း၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများကျွန်တော်တို့ရဲ့လာမည့်ကိစ္စများအတွက်လာလိမ့်မည်ဟု BTT editors.Please မှတ်စုများ၏တက်ကြွစွာကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် Ataullah အယ်လ် Farhan ကတီထွင်ထားပြီး.
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခွဲတမ်းအစီအစဉ်၏ဖယ်ပြီးနောက်, အဆိုပါအထည်အလိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းမြန်နှုန်းမြင့်မှာထွန်းကားနေသည်. ကမ္ဘာကြီးကိုစက်မှုတော်လှန်ရေး၏အသစ်တခုစင်္ကြံပေါ်တွင်ဖြစ်ပါသည်. လေ့လာသုံးသပ်သူများကချည်မျှင်သုံးစက်ပစ္စည်းများတွင်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများပိုမိုချဲ့ထွင်ထားချက်အရနေကြတယ်. တရုတ်ကဲ့သို့အထည်အလိပ်စက်ယန္တရားကုန်ထုတ်လုပ်မှုအချက်အချာ, ဂျာမနီ, အီတလီ, ဆွစ်ဇာလန်နှင့်အိန္ဒိယပြီးသားအထည်အလိပ်စက်ပစ္စည်းအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းပညာကျွမ်းကျင်စွာနဲ့လေလံဆွဲရန်အလွန်ကြီးမားသောပြိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ခုန်တက်ခဲ့ကြ. ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစက်မှုလေ့လာသုံးသပ်သူများ, Inc မှ. ( Error 404 (Not Found)!!1
The requested URL /translate_a/t was not found on this server. That’s all we know. ) အထည်အလိပ်စက်ပစ္စည်းများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးအထည်တိုးပွားလာနေသည်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်လုပ်ကြောင်းခေတ်မီစက်များအတွက် 2017.Demand အားဖြင့်အမေရိကန် $ 22.9 ဘီလီယံအထိရောက်ရှိရန်ခန့်မှန်းကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်. နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲ, ဝယ်ဆုံးဖြတ်ချက်အလွန်စက်တွေကလွှမ်းမိုးနေသည်’ ဘက်စုံ, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, နှင့်စျေးနှုန်းကမ်းလှမ်းမှု. အဆိုပါအထည်အလိပ်စက်ပစ္စည်းဈေးကွက်ထဲမှာပြောင်းလဲနေသောကြီးထွားမှုအတွက်အဓိကအချက်စီးပွားရေးပြန်လည် post ကိုစီးပွားရေးကျဆင်းမှုဆံ့, nonwoven တစ်ခါသုံးအထည်အလိပ်ထုတ်ကုန်များအတွက်မြင့်တက်ဝယ်လိုအား, အလားအလာဒေသများထံမှတိုးပွားလာဝယ်လိုအား, အထူးသဖြင့်အာရှပစိဖိတ်, နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်-ဖော်ရွေ fibers.This ဆောင်းပါးဝယ်လိုအားတက်ကမ္ဘာကြီးကိုဦးဆောင်အထည်အလိပ်စက်ယန္တရားကုန်ထုတ်လုပ်မှုနိုင်ငံများတွင်အချို့လေ့လာဆန်းစစ်.
တရုတ်အထည်အလိပ်ထုတ်လုပ်သူအထည်အလိပ်လုပ်ငန်းနည်းပညာဆိုင်ရာရှုထောင့်မှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးအဖြေကိုအချို့ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ကြောင်း, အလွန်အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းများနှင့်အတူ. အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းလျင်မြန်စွာတိုးချဲ့နှင့်အတူ, တရုတ်နိုင်ငံ၏အထည်အလိပ်စက်ယန္တရားစက်မှုလုပ်ငန်းလည်းဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်တစ်ဦးအခါသမယအတော်ပင်, နှင့်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအထည်အလိပ်စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူဖြစ်လာ. တရုတ်နီးပါးစက်မှုထွန်းကားစက်ကိုစတင် 80 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာ. လက်ရှိအချိန်မှာ, တရုတ်လုပ်အထည်အလိပ်စက်ယန္တရားနှင့်ကိရိယာအကောင့် 80 ပြည်တွင်းအထည်အလိပ်စက်ယန္တရားစျေးကွက်၏ရာခိုင်နှုန်းကို. ဒါပေမဲ့, စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ရင်ဆိုင်နေရခြင်းဖြစ်သည် 50 ရောင်းအားရှယ်ယာရာခိုင်နှုန်းလျော့နည်း, သာ 15 စုစုပေါင်းရဲ့ margin ရာခိုင်နှုန်း, ဒါကြောင့်အရှုံးလွှမ်းခြုံမြင့်မားသည်
တရုတ်ဆဲကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအထည်အလိပ်နယ်ပယ်တွင်အတွက်အကြီးမားဆုံးစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်. အာရှရှိနိုင်ငံအများအပြားထုတ်ကုန်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ညှိနှိုင်းမှုရင်ဆိုင်နေရ, ဒါကြောင့် high-end ၏ဝယ်လိုအားနှင့်အထည်အလိပ်စက်ပစ္စည်း၏ပြီးပြည့်စုံအစုံဝယ်လိုအားများမှာ. တရုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းအိန္ဒိယအထည်အလိပ်ကုန်သွယ်မှုအင်အားကြီးတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်သိသာအားသာချက်ရှိပါတယ်, ပါကစ္စတန်, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, နှင့်တူရကီ, အထူးသဖြင့်ဝါဂွမ်းချည်ငင်စက်ကိရိယာများအတွက်, polyester ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်စျေးနှုန်းကြောင့်ဆေးဆိုး-ပုံနှိပ်ပစ္စည်းကိရိယာများပြည့်စုံအစုံ.
တရုတ်ရှင်းလင်းစွာမြင့်မားတဲ့နည်းပညာများနှင့်မြင့်မားသောတန်ဖိုးကိုဆက်ပြောသည်ထုတ်ကုန်အပေါ်အဓိကထားနေသည်နှင့်အမျှ, အထည်အလိပ်စက်ယန္တရား မှစ. ယခုနှစ်အာရုံစိုက်ဖို့တိုင်းပြည်အတွက်အဓိကဧရိယာဖြစ်ခြင်းနှင့်မယ်လို့. တရုတ်စက်မှုနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနရောင်းအားအတွက်အဆင့်မြင့်နည်းပညာထုတ်ကုန်များ၏ရာခိုင်နှုန်းမူရင်းကနေတိုးမြှင့်သင့်ကြောင်းသတ်မှတ်ပါတယ် 40 percent to 60 ရာခိုင်နှုန်းနှင့်စုစုပေါင်းကော်ပိုရေးရှင်းအရေ�ရာခိုင်နှုန်း�မြင့်နည်းပညာထုတ်ကုန်များ၏သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေ၏အချိုးအစားမူရင်းကနေတိုးမြှင့်သင့်တယ်2percent to5ရာခိုင်နှုန်းကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း.
တရုတ်အထည်အလိပ်စက်ယန္တရားများတင်ပို့ဒါပေမယ့်လည်းအထည်အလိပ်စက်ပစ္စည်းများ၏အလားအလာတင်သွင်းသူသာဖြစ်ပါသည်. အထည်အလိပ်စက်ပစ္စည်းများအတွက်အလားအလာတင်သွင်းစျေးကွက် Jiangsu တူသောတရုတ်ပြည်နယ်များဖြစ်ကြသည်, Zhejiang နှင့်ဂွမ်ဒေါင်း, အရာအကြမ်းဖျင်းအဘို့မှတ် 71% တရုတ်နိုင်ငံ၏ခြုံငုံအထည်အလိပ်စက်ယန္တရားတင်သွင်းမှု. ပြီးခဲ့သည့်နှစ်စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူအတွက်လောင်းအမိန့်ကြုံတွေ့နှင့်စျေးကွက်တရုတ်စက်ယန္တရားအပေါ်ကမ္ဘာ၏အာရုံစိုက်မှုကိုမျက်မြင်. ကမ္ဘာတဝှမ်းအတော်များများဦးဆောင်စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၎င်းတို့၏ထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်းတိုးချဲ့ဘို့တရုတ်ကို ရွေးချယ်. နှင့်တရုတ်နိုင်ငံများတွင်မိမိတို့၏ကုန်ထုတ်ယူနစ်ထူထောင်. လျင်မြန်သောစက်မှုနှင့်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းတရုတ်အတွက်နောက်ဆက်တွဲစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအာရှအထည်အလိပ်ထုတ်လုပ်မှုသိသိသာသာမြင့်တက်ဖို့လှူဒါန်းခဲ့ထားပါတယ်. ထိုကဲ့သို့သောတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ 12 ငါးနှစ်စီမံကိန်းအဖြစ်တရုတ်အစိုးရအစပျိုး (2011-2015) အရာအထည်အလိပ်များနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍများအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူတန်းတူအပေါ်လက်ရာလက်နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးနှင့်တိုးတက်မှုဦးစားပေးအာရှဈေးကွက်ထဲမှာကြီးထွား turnmomentous ရန်မျှော်လင့်နေသည်.
တရုတ်ရှင်းလင်းစွာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအထည်များနှင့်အထည်အလိပ်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုမြင့်မားနည်းပညာအလိုအလျောက်အသုံးပြုမှုအပေါ်ပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်တာဖြစ်ပါတယ်, ဤအရပ်မှသူတို့အားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်စက်ပစ္စည်းတရုတ်ဆီသို့ဦးတည်ရွှေ့မည်. မကြာသေးခင်ကရှန်ဟိုင်းအာရှအတွက်အများဆုံးဖက်ရှင်သတိမြို့ကြီးများ၏တဦးတည်းဖြစ်လာသည်. တရုတ်ထည်နှင့်အထည်ထုတ်လုပ်နှင့်တန်ဖိုးထို့အပြင်ရှာနေသည်နှင့်အမျှ, သူတို့ဤအရပ်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသူတို့အားထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများအဘို့ရာအရပ်ကိုယူမယ်လို့အစာရှောင်ဖက်ရှင်ထုတ်ကုန်များအတွက်ရွေ့လျားနေကြသည်.
အိန္ဒိယအထည်အလိပ်စက်ယန္တရားစက်မှုလုပ်ငန်းထက်ပို 50 အသက်အနှစ်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းနေ့စဉျတိုးပွားလာနေသည်. အကွောငျး 750 စက်ယန္တရားနှင့်ကိရိယာကုန်ထုတ်လုပ်မှုယူနစ်အိန္ဒိယ၌ရှိကြ၏, ကျော်သော 250 ယူနစ်ပြည့်စုံစက်တွေထုတ်လုပ်, ဖြစ်ပြီးကျန်အသီးအနှံအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း. ပစ္စုပ္ပန်မှာအထည်အလိပ်စက်ယန္တရားကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍတွေ့ဆုံနေသည် 45-50 ပြည်တွင်းအထည်အလိပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးဝယ်လိုအားရာခိုင်နှုန်း, အဘယ်သူ၏အဓိကမဲဆန္ဒနယ် ginning ဖြစ်ပါသည်, ငင်, ယက်လုပ်ခြင်းနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့. တိုင်းပြည်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးပစ္စည်းများအတွက်အလွန်ကောင်းလှ၏, စက် mount & စားသုံးသူအစိတ်အပိုင်းများပေမယ့်နေဆဲကဏ္ဍယက်လုပ်ခြင်းစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်နောက်ထပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလိုအပ်ပါတယ် (shuttleless နေရာယူထား) တချို့အမြင့်ဆုံး- နည်းပညာအပြောင်းအလဲနဲ့စက်ယန္တရား.
အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့စက်ယန္တရားတင်ပို့သူများ, သော်လည်း, သူတို့၏ Liberation ကုန်သွယ်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ယှဉ်ပြိုင်ကျန်ကြွင်းသောသေချာအောင်အမျိုးမျိုးသောမဟာဗျူဟာများအားအသုံးချခဲ့ကြ 2013 နှင့်ကျော်လွန်. အတော်များများကထုတ်လုပ်သူအဆင့်မြင့်အော်တိုစနစ်ကတဆင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးတို့အတွက်အရေးယူနေကြသည်, Re-အင်ဂျင်နီယာကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းစနစ်များ, သီးခြားထုတ်လုပ်မှုယူနစ်ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့် ခေတ်မီအဘို့အ scheme, အတွက်တိုးမြှင့်ဝယ်လိုအားအတွက်မျှော်နည်းပညာအဆင့်မြှင့်တင်နဲ့ productivity တိုး 2013 နှင့်အခြားထုတ်လုပ်သူအကြားတဘက်ထောက်ပံ့ငွေအစီအစဉ်အောက်တွင်ပင်ခေတ်မီများအတွက်အဟောင်းကိုအသုံးပြုတဲ့နည်းပညာဖို့အားပေးစကားမှတဆင့်အပြောင်းအလဲများရှာကြသည်, အဆိုပါကျတ်ဖို့အားပေးစကား ပါဝါကိုရက်ကန်းစင်ပေါရာဏနည်းပညာနှင့်အတူ၎င်း၏စွမ်းရည်ကိုချဲ့ထွင်ရန်ကဏ္ဍနှင့်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီများနှင့်ဖက်စပ်တည်ထောင်ခြင်းဖြင့် ADDED တန်ဖိုးကိုမြှင့်တင်ရန်စီစဉ်နေကြသည်အချို့, သူတို့ရဲ့နည်းပညာပိုင်း၏အကျိုးကျေးဇူးယူ, ဒီဇိုင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာကျွမ်းကျင်မှု. အခြားသူများကသူတို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစွမ်းရည်တိုးမြှင့်ဖို့နိုင်ငံခြားတင်သွင်းအတူဆက်ဆံရေးလုပ်နေပါတယ်.
တစ်ဦးအထည်အလိပ်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူအဖြစ်, အိန္ဒိယကာလအတွင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးအခုထက်ကာလအတွင်းအချို့သောပို့ကုန်ယိုယွင်းရင်ဆိုင်ခဲ့ 2009-10, ထိုအခါမူကား၎င်းတို့သည်ပြန်လည်ကောင်းမွန်နှင့်စဉ်အတွင်းအနည်းငယ်ပစ်မှတ်အထက်တွင်ကျန်ရစ် 2010-11. ထဲမှာ 2011-12 ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တိုင်းပြည်အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်ဝှမ်းမှချည်မျှင်နှင့်အထည်နှင့်အဝတ်ပို့ကုန်များ၏ပစ်မှတ်ပြည့်စုံပြီ 28-30 ဘီလီယံအထိ. အမေရိကန်နှင့်အီးယူ, အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ချည်မျှင်နှင့်အထည်တင်ပို့မှုများနှင့် ပတ်သက်. နှစ်ဦးကိုတတိယအဘို့အကောင့်. အခြားအဓိကပို့ကုန်နေရာများကနေဒါများမှာ, ယူအေအီး, ဂျပန်, ဆော်ဒီအာရေဗျ, ကိုရီးယားသမ်မတနိုငျငံ, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နှင့်တူရကီ.
အိန္ဒိယအထည်အလိပ်စက်ယန္တရားများတင်ပို့ဒါပေမယ့်လည်းအထည်အလိပ်စက်ယန္တရားများတင်သွင်းသူသာဖြစ်ပါသည်. အထည်အလိပ်စက်ပစ္စည်းတင်သွင်းစဉ်အတွင်းအမေရိကန် $ 0.92billion ကနေထမြောက်တော်မူပြီ 2010-2011 အမေရိကန် $ 1.38billion (ခန့်မှန်းခြေ) နေစဉ်အတွင်း 2011-2012. ပို့ကုန်စဉ်အတွင်း 2011-2012 အမေရိကန် $ မှာခန့်မှန်းခဲ့ကြသည် 147 အမေရိကန် $ ဆန့်ကျင်အဖြစ်သန်း 168 2010-2011.The တွေများကမ္ဘာ့စျေးကွက်ကာလအတွင်းအောင်မြင်သန်းအောက်ပိုင်းပို့ကုန်များအတွက်တာဝန်ရှိသည်.
အီတလီအထည်အလိပ်စက်ယန္တရားစက်မှုကဏ္ဍန်းကျင်ပါဝင်သောအဓိကစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် 300 ကုမ္ပဏီများမှ (အကြမ်းအားဖြင့်အလုပ်သမား 12,400 လူထု) နှင့်အမေရိကန် $ တစ်ဦးစုစုပေါင်းတန်ဖိုးစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ် 3.41 တစ်နှစ်လျှင်ဘီလီယံအထိ, ပို့ကုန်ပမာဏနှင့်အတူ 80% စုစုပေါင်းရောင်းအား၏. အီတလီအထည်အလိပ်နည်းပညာ၏အရည်အသွေးအီတလီစက်ပစ္စည်းရောင်းသောနိုင်ငံများတွင်၏မြင့်အရေအတွက်အားဖြင့်သက်သေဖြစ်ပါတယ်: လှည့်ပတ် 130 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနိုင်ငံများ.
ပို့ကုန်အမြဲအီတလီနိုင်ငံကဏ္ဍရဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းနောက်ကွယ်ကတွန်းအားခဲ့ကြသည်. အဓိကအထည်အလိပ်စျေးကွက်၏စိတ်အားထက်သန်မှု, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတိုင်းအတာပေါ်သူတို့ကိုအခိုင်အမာမှအီတလီစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများ၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့်အတူပေါင်းစပ်, ပို့ကုန်အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုလှူဒါန်းခဲ့. နီးပါး 25 ပြည်ပမှာကဏ္ဍရဲ့ရောင်းအားရာခိုင်နှုန်းကိုတရုတ်နိုင်ငံသို့ညွှန်ကြားနေကြတယ်, အာရှစျေးကွက်ယေဘုယျအားဖြင့်အဘို့အစာရင်းကိုင်နှင့်အတူ 50 အားလုံးနိုင်ငံခြားရောင်းအားရာခိုင်နှုန်း.
စတုတ္ထသုံးလပတ်ကာလအတွင်း 2012, အထည်အလိပ်စက်ပစ္စည်းများအတွက်အမိန့်အညွှန်းကိန်းမြင့်တက် 22 ရာခိုင်နှုန်းယခင်သုံးလပတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ. ပို. ပင်သိသာထင်ရှားသောယခင်နှစ်ကာလတူရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူတိုးခဲ့တာ (+46 ရာခိုင်နှုန်း).
ယေဘုယျအားအမိန့်ကိုလည်းပြည်တွင်းစျေးကွက်အပေါ်အပြုသဘောလမ်းကြောင်းသစ်ကနေအကျိုးအမြတ်, သောအဘို့ 47 ရာခိုင်နှုန်းတိုးနှုန်းသုံးခုယခင်လအတွင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအမှန်တကယ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့. နိုင်ငံခြားစျေးကွက်အပေါ်တိုးတက်မှုနှုန်းအနည်းငယ်ပိုပြီးမှာပါရှိသောခဲ့သည် +20 per cent. မှုအတွက်အီတလီအထည်အလိပ်စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှု၏တန်ဖိုးကိုသွားရမည်အကြောငရာခိုင်နှုန်း011 မှတ်ပုံတင်ထားမယ့်9နှိုင်းယှဉ်ရာခိုင်နှုန်းတိုးနှုန်း 2010, အမေရိကန် $ ကနေ 3.072 အမေရိကန် $ 3.328 billion. အလားတူတိုးပို့ကုန်များအတွက်မှတဘီလီယံအထိ��်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ် (+10 per cent), ပဲအမေရိကန်ကိုကျော် $ တန်ဖိုး 2.688 billion.
မတူတာကတော့, ဝယ်လိုအားပြည်တွင်းစျေးကွက်အတွင်းမှအထူးသဖြင့်အားနည်းကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်. အီတလီမှာ, ယေဘုယျအားဖြင့်ဥရောပသမဂ္ဂတစ်လျှောက်လုံးအဖြစ်, လက်ရှိစီးပွားရေးမရေရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်, ပင်အထည်အလိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်. အတွေ့အကြုံတိုးတက်မှု၏ကြားမှ 2012, အီတလီစက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူလက်ရှိတစ်နှစ်အလွန်သတိထားရှိနေဆဲ.
စပိန်အထည်အလိပ်စက်ယန္တရားစက်မှုလုပ်ငန်းထက်လျော့နည်း၏ခွန်အားနှင့်အသေးစားနှင့်အလတ်စားကုမ္ပဏီတွေရဲ့အစီအစဉ်နှင့်အတူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ထားပါတယ် 50 န်ထမ်း. အဲဒီကုမ္ပဏီတွေကနေဆဲစျေးနှုန်း၏နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းမှီဖို့ကမ္ဘာကြီးကိုခေါင်းဆောင်များနှင့်အလွန်ခက်ခဲယှဉ်ပြိုင်ရှာဖွေနေပါသည်, ပုံစံ, အရည်အသွေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှု. စက်အပိုပစ္စည်းယက်, ဇာထိုး, အပ်ချုပ်, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်ချည်ငင်စပိန်၏အထည်အလိပ်စက်ယန္တရားကဏ္ဍအောက်တွင်ပေါင်းစည်းမတူညီသောအမျိုးအစားများဖြစ်ကြသည်. အကွောငျး 80 စက်ယန္တရားကုမ္ပဏီများမှဘဏ္ဍာရေးနှစ်အကြွေးတန်ဖိုးကိုရရှိ 260 အဆိုပါစပိန်သန်းယူရို.
လက်တင်အမေရိကကဲ့သို့နိုင်ငံများအတွက်အဆိုပါပို့ကုန်, မြောက်အမေရိကနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာလည်းမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်. အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့တူနယူးနေရာများ, မက္ကစီကို, ပြင်သစ်, တူရကီနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့သည်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်များ၏ဝယ်လိုအားတက်သွားများအတွက်စိတ်ရင်းနေသောသစ်ကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲစျေးကွက်ရှိ.
ဆေးဆိုးခြင်းနှင့်ပြီးသွားကဏ္ဍ၏ပါဝင်ပါသည် 35 ကုမ္ပဏီများနှင့်တိုင်းပြည်၏ဦးဆောင်ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သည်. ကအောက်ပါအတိုင်းထားတဲ့အခြားကဏ္ဍနဲ့ချည်ငင်စက်အပိုင်းဖြစ်ပါသည် 25 ကုမ္ပဏီများမှ. နှစ်ဦးစလုံးခွဲကဏ္ဍများစက်ပစ္စည်းအသစ်တီထွင်မှုများအဘို့ aneventual ရှိပါတယ်. စပိန်အတွက်စက်ယန္တရားများ၏ပြည်ပပို့ကုန်၏ဖြစ်ပါသည် 70% ၎င်း၏စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှု၏.
ဂျာမဏီတစက်တစ်ခုလုံးကိုဘဝသံသရာစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဂျာမန်စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၏သော့ချက်အားသာချက်သိသာဖြစ်လာ export.The အထည်အလိပ်စက်ပစ္စည်း၏ acrucial ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်ထွက်ခုန်တက်ခဲ့ပြီးစက်ပစ္စည်းအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့ 5th ရာထူးအားဖြင့်နေရာမှလုံခြုံထားပါတယ်. တစ်စက်တစ်ခုလုံးကိုတစ်သက်တာကာလအတွင်း, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်ခန့်သာကိုယ်စားပြုသည် 10 သို့ 50 ခြုံငုံကုန်ကျစရိတ်ရာခိုင်နှုန်း.
နှစ်ခုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နှစ်ကြာပြီးနောက်, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအထည်အလိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရာသီဥတုပိုမိုအလယ်အလတ်ဖြစ်လာခဲ့သည် 2012. ဒါဟာအစများ၏ကိန်းဂဏန်းများကိုအောက်တွင်ခဲ့သောဂျာမန်အထည်အလိပ်စက်ယန္တရားစက်မှုလုပ်ငန်း၏အမိန့်စားသုံးမှုအတွက်ရောင်ပြန်ဟပ်ခဲ့သည် 2011, သို့သော်တစ်ဦးကျေနပ်စရာအဆင့်တွင်. ရောက်ရှိနေပြီဂျာမန်အထည်အလိပ်စက်ယန္တရားတင်ပို့မှု 1.82 ဘီလီယံပထမနှစ်ဝက်အတွက်ယူရို 2012 (အနှုတ် 2.7 ရာခိုင်နှုန်းတစ်နှစ်-on-တစ်နှစ်လျှင်). အရေးအပါဆုံးစျေးကွက်အတွင်းအားနည်းဘဏ္ဍာရေးနှစ်အခြေအနေများအပေါ်မှာအခြေခံ, စက်မှုလုပ်ငန်းခက်ခဲတဲ့တစ်နှစ်ဖြတ်သန်းသွားခဲ့ရတယ်.
ကစုပ်ယူအဖြစ်အာရှအကြီးမားဆုံးစျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ် 40% ဂျာမန်အထည်အလိပ်စက်ယန္တရားတင်ပို့မှု၏. အိန္ဒိယကနောက်ဆုံးနှစ်တွင်အာရှရှိ thesingle အကြီးဆုံးဂလိုင်းတခုဖြစ်တယ်. ဇန်နဝါရီလနှင့်ဇူလိုင်လများအကြား 2012, ဂျာမန်အထည်အလိပ်စက်ယန္တရားတန်ဖိုးရှိ 111 သန်းယူရိုအိန္ဒိယသို့တင်ပို့ခဲ့သည်. ဂျာမန်အထည်အလိပ်စက်များအတွက်ရေပန်းစားဒုတိယအမေရိကန်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ 10 ဂျာမန်အထည်အလိပ်စက်တွေနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက်အကြီးဆုံးပို့ကုန်စျေးကွက် areIndia, တရုတ်နိုင်ငံ (ဟောင်ကောင်အပါအဝင်), ကြက်ဆင်, အမေရိကန်,အီတလီ, ချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ဘရာဇီး, ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံနှင့်ပါကစ္စတန်.
ဂျာမန်အထည်အလိပ်စက်ယန္တရားက၎င်း၏အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်ဖောက်သည်-တိကျတဲ့ထုတ်လုပ်မှုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါသည်. ဂျာမန်ချည်မျှင်စက်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကစားသမား setting အဆိုပါလမ်းကြောင်းသစ်အကြီးအခွင့်အလမ်းများနှင့်သူတို့ကိုပေးထားတဲ့သစ်ကိုလျှောက်လွှာလယ်ကွင်းစူးစမ်းဖို့ရပ်တန့်ဖူးဘူး.
အဆိုပါဘယ်လ်ဂျီယံစက်ယန္တရားစက်မှုလုပ်ငန်း, ယင်း၏အထည်အလိပ်စက်ယန္တရားရေတွက်, ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့်တိုင်းတာသည်အကောင်းဆုံးအစဉ်အဆက်စက်မှုကဏ္ဍကြီးထွားလာဖြစ်ပါသည်. ယခင်တုန်းက5နှစ်ပေါင်းများစွာ ayearly ကြီးထွားမှုနှုန်း 4.5% ဒီကဏ္ဍမှာအောင်မြင်ခဲ့သည်, ယင်း၏ကမ္ဘာ့စျေးကွက်မှာဝေစုနှင့်အတူမြင့်တက်နေစဉ် 10%. ကြောင်းစွမ်းဆောင်မှုများအတွက် Avital မောင်း 1998-2008periods ကျော်စက်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ၏နှစ်ဆတိုးသွားခဲ့ခြင်းမှာခဲ့သည်. မှစ. 2012, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုထပ်တက်ခူးခဲ့ကြပြီးဘယ်လ်ဂျီယံစက်ယန္တရားကုမ္ပဏီများသည်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်ဖှံ့ဖွိုးတိုးနှုန်းသည်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဖို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ပြောင်းလဲနေကြသည်. အခုတော့ဘယ်လဂျီယံစက်ယန္တရားစက်မှုလုပ်ငန်းနိုင်ငံ၏ 3th တင်ပို့ဖြစ်ပါသည်.
ဘယ်လဂျီယံစက်ယန္တရားအမြဲ R ကို၏အာရုံစူးစိုက်&D, အဖြစ် 7% ဤအစက်မှုလုပ်ငန်း: D��ျားကဆက်ပြောသည်တန်ဖိုး R ကိုအတွက်ပေးသနားခဲ့သ&D နှင့်ကိုကျော်န်ထမ်း 10% စုစုပေါင်းဘယ်လ်ဂျီယံသုတေသနဦးခေါင်းရေတွက်၏. အဆိုပါစက်မှုလုပ်ငန်းပြင်းပြင်းထန်ထန်စွမ်းအင်ထိရောက်မှုအပေါ်သုတေသနပြုအားထုတ်မှုအရှိန်.
အဆိုပါဘယ်လ်ဂျီယံအထည်အလိပ်စက်ယန္တရားစက်မှုလုပ်ငန်းရေတွက် 30 ကုမ္ပဏီများမှ, တစ်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်ရှိပါတယ် 1 ဘီလီယံအထိယူရိုနှင့်တစ်ဦးလူဦးရေ 4000. ၎င်း၏ကုမ္ပဏီများကမိုးလုံလေလုံအထည်များအတွက်စက်ယန္တရားများတွင်တက်ကြွစွာများမှာ (ကော်ဇော, ကူရှင်ချုပ်, ကတ္တီပါ,စားပှဲ – အိပ်ရာပိတ်ချော), အထည်ချုပ်အထည်, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအထည်များနှင့်အထည်အလိပ်ပြီး. ဘယ်လ်ဂျီယံကမ္ဘာပေါ်မှာအမြန်ဆုံးလေကြောင်းဂျက်ယက်လုပ်ခြင်းစက်တွေကိုထုတ်လုပ်. အဆိုပါဘယ်လ်ဂျီယံအထည်အလိပ်စက်ယန္တရားကုမ္ပဏီများမှနည်းပညာဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်မှုမဟာဗျူဟာကိုလိုက်.
ဒါဟာပြင်သစ်အထည်အလိပ်စက်ယန္တရားစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ပြောင်းလဲနေသောကဏ္ဍကြောင်းမှတ်သားစေခြင်းငှါ, အဆိုပါအထည်အလိပ်စက်မှုလုပ်ငန်း၏သမိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍ. အထူးသဖြင့်, Jacquard ၏ Illustrious name ကိုစဉ်းစား, အများဆုံးခေတ်မီယက်လုပ်ခြင်းနည်းပညာ၏ပြင်သစ်တီထွင်သူ. ပြင်သစ်ရှိပါတယ် 35 အထည်အလိပ်စက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု -companies, တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်နှင့်အတူ 1.5 ဘီလီယံကိုယူရို, ပို့ကုန် 91 သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ရာခိုင်နှုန်း 115 ဖောက်သည်နိုင်ငံများ.
ပြင်သစ်စက်မှုလုပ်ငန်းမဟာဗျူဟာယခုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်ကုန်ထံမှစံခွဲခြားရန်ဖြစ်ပါသည်, ပစ္စည်းကိရိယာနှင့်နည်းပညာခေတ်မီ, နှင့်အဆင့်မြင့် ADDED တန်ဖိုးတီထွင်နှင့်ထုတ်ကုန်ပြောင်းရွှေ့ဖို့. ဖုံးလွှမ်းတိကျတဲ့ကဏ္ဍများရှည်လျားဖိုင်ဘာစက်ယန္တရား spinning နေကြတယ်; အထည်အလိပ်စွန့်ပစ်နာလန်ထူစက်တွေ; နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအထည်၏ကြိုးကုသမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်စနစ်များ; nonwovens ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း; ယက်လုပ်ခြင်းများအတွက်အပိုဆောင်းကိရိယာတန်ဆာပလာ (dobbies နှင့် jacquard အကြီးအကဲများ); အရောင်ချွတ်ဘို့ပြီးသွားစက်တွေ, ဆေးဆိုး, ချည်ပြီး, ထိုးပြီးကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အထည်အလိပ်ရေအားလျှပ်စစ်-extractors အဘို့အပြီးလိုင်းများ; အထည်အလိပ်စက်ရုံတွေနှင့်လေအေးပေးစက်ပစ္စည်းကိရိယာများ. nonwoven ဖြစ်စဉ်များကဲ့သို့အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းသစ်ကိုကဏ္ဍများတွင်, ပြင်သစ်စက်ယန္တရားဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ၏အတိအကျရှာရန်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်.
သူတို့ရဲ့ဘဝသံသရာ၏အဆုံးမှာအထည်အလိပ်ပစ္စည်းများပြန်သုံးနှင့်အသစ်ထုတ်ကုန်သို့သူတို့ကိုငါအသွင်ပြောင်း, ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတဖြစ်ခြင်း, ထို့အပြင်ပြင်သစ်စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်အကြားနေသောတခုတခုအပေါ်မှာပြဿနာဖြစ်ပါသည်.
အထည်အလိပ်ဂျီဒီပီ၏စည်းကမ်းချက်များ၌တူရကီနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးအတွက်အဓိကကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တယ်, အလုပ်အကိုင်နှင့်ပြည်ပပို့ကုန်. အထည်အလိပ်များအတွက်အကောင့် 10 % တူရကီဂျီဒီပီ၏နှင့် 20% ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍတွင်အလုပ်အကိုင်. ချည်မျှင်နှင့်အထည်နှင့်အဝတ်အစားစက်မှုလုပ်ငန်းထုတ်လုပ်မှု၏တန်ဖိုးသည်အမေရိကန် $ ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ် 30 ဘီလီယံနှင့်အမေရိကန် $ တင်ပို့ 19,3 တစ်နှစ်လျှင်အထည်အလိပ်နှင့်အဝတ်အစားများဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ။ ဤငွေပမာဏနှင့်အတူ, ဒါကြောင့်တစ်ဦးဝေစုခဲ့ 19 % တူရကီစုစုပေါင်းပို့ကုန်အတွက်တူရကီအတွက်ခိုင်မာတဲ့အထည်အလိပ်လုပ်ငန်းအထည်အလိပ်စက်ယန္တရားစက်မှုလုပ်ငန်းများတိုးချဲ့ချွတ်ကန်. သည်အထိ 1980 အားလုံးနီးပါးအထည်အလိပ်စက်ပစ္စည်းတင်သွင်းခဲ့သည်. သို့သျောလညျး, အတွက်စတင် 1980 အသေးစားနှင့်အလတ်စားနိမ့်နည်းပညာစက်ပစ္စည်းအချို့ဒေသခံထုတ်လုပ်မှုစတင်ခဲ့သည်. လက်ရှိအချိန်မှာ, ကုမ္ပဏီများကထုတ်လုပ်ထုတ်ကုန်များ၏မျဉ်းအခြေခံမော်ဒယ်များမှသိသိသာသာမြင့်မား automated ပစ္စည်းကိရိယာများအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသည်, နှင့်ဒေသခံထုတ်လုပ်သူများတတ်နိုင်ကြသည် သို့ ယှဉ်ပြိုင် နှင့် နိုင်ငံခြားရေး ကုမ္ပဏီများမှ တွင် အများဆုံး ယန္တရား အမျိုးအစား, ထိုကဲ့သို့သော လေထုဂျက်ဆေးဆိုးအဖြစ် (ပွညျ့လြှံ) သို့မဟုတ်ထိုးနှက်ဆေးဆိုးစက်ယန္တရား.
အထည်အလိပ်စက်ယန္တရားပို့ကုန်အကြားတစ်ဦးအထက်သို့လမ်းကြောင်းသစ်ရှိ 2002 နှင့် 2008. တူရကီအထည်အလိပ်စက်ယန္တရားတင်ပို့မှုကိုအမေရိကန် $ ခဲ့ကြသည် 271 million in 2008, နှင့်အမေ�သန်းအတွက်�် $ မှယုတ်လျော့ 263 million in 2009 တစ်ဦးဝေစုနှင့်အတူ 3.2 % စုစုပေါင်းစက်ယန္တရားပို့ကုန်အတွက်. စဉ်အတွင်း 2010 ပို့ကုန်စျေးကွက်၏တစ်ဦးကြီးထွားခဲ့ 266 သန်းဒေါ်လာ. လက်ရှိအချိန်မှာ, တူရကီအထည်အလိပ်စက်ယန္တရားစက်မှုလုပ်ငန်းအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအများဆုံးခေတ်သစ်ဖြစ်ပါသည်, မြောက်အာဖရိက, ဘော်လကန်, ဘောလ်တစ်နှင့်ဗဟိုအာရှနှင့်စက်ယန္တရားများနှင့်စက်ကိရိယာများမှအထည်အလိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်လိုအပ်သောအပေါင်းတို့နှင့်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်. အဆိုပါကဏ္ဍတင်ပို့မှုနှင့် ပတ်သက်. ရန်ညွှန်ကြားနေကြတယ် 135 ရာထူး၏နိုင်ရန်အတွက်နိုင်ငံများနှင့်အဓိကပို့ကုန်စျေးကွက်သည်အဲဂုတ္တုများမှာ, အီသီယိုးပီး, အိန္ဒိယ, ဥဇဘက်နှင့်ဘင်္ဂလားဒေ့, အားလုံးနီးပါးအထည်အလိပ်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုနိုင်ငံများ. အမြင့်အင်ဂျင်နီယာကျွမ်းကျင်မှု, ထုတ်ကုန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်လိုက်လျောညီထွေ, နှင့်ရောင်းအားန်ဆောင်မှုများအပြီးထိရောက်တူရကီမှုနှုန်း anrising မှာလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်အထည်အလိပ်စက်ယန္တရားလုပ်တင်ပို့ဖို့တူရကီကို enable.
မြို့တော်စက်ပစ္စည်း၏မကြာသေးခင်ကဘင်္ဂလားဒေ့ဘဏ် data တွေကိုတင်သွင်းနှုန်းအားဖြင့်အကြီးအကျယ်ကျဆင်းအဖြစ် 26 နှစ်ဦးစလုံးပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ၏တိုးတက်မှုနှုန်းနှေးကွေးမှုကြောင့်အလားတူကာလသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကနေလက်ရှိဘဏ္ဍာနှစ်၏ဇူလိုင်လ-ဧပြီလကာလအတွင်းရာခိုင်နှုန်း. BB ဒေတာမြို့တော်စက်ယန္တရားများတင်သွင်းဘို့ LCs ဖွင့်ပွဲသာဖြစ်ခဲ့သည်ပြသ $ 1.797 နှိုင်းယှဉ်လက်ရှိဘဏ္ဍာနှစ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးတဆယ်လတာကာလအတွင်းဘီလီယံအထိ $ 2.421 ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က၏သက်ဆိုင်ရာကာလအတွင်းဘီလီယံအထိ. အထည်အလိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းအထက်ပါဖော်ပြခဲ့တဲ့မြို့တော်စက်ပစ္စည်း၏ခြင်္သေ့ဝေစုကိုဤစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ပါလိမ့်မယ်ဤအရပ်မှတိုင်းပြည်နံပါတ်တစ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်ဖြစ်ပါသည်. သို့သော်ကြောင့်အချက်အလက်များ၏လက်လှမ်းမမှီပါရန်ကြောင့်အထည်အလိပ်တက်ချုပ်ဖော်ပြနိုင်ဘူး & RMG စက်မှုလုပ်ငန်းမြို့တော်စက်ပစ္စည်းတင်သွင်းလျှော့ချသို့မဟုတ်မထားပါဘူး. ဒါပေမယ့်ကျိန်းသေဘင်္ဂလားဒေ့ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍ၏ရလဒ်နိုင်ပါတယ်သောဤဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်တစ်ဖွဲ့လုံးကစက်ယန္တရားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမရှိခြင်းခံစားနေရပြီးသောလမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်, ဓာတ်ငွေ့လျှပ်စစ်ဓါတ်အား & ယခုနှစ်မှတဆင့်သွားသည့်နိုင်ငံရေးလှိုင်းလေထန်. ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကဒီဘဏ္ဍာရေးနှစ်မတိုင်မီဘင်္ဂလားဒေ့နှစ်ပေါင်းကာလကိုတစျဆငျ့အထည်အလိပ်စက်ပစ္စည်းတင်သွင်းအတွက်အားကောင်းတဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်မှုရှိခြင်းခဲ့ဖေဖော်ဝါရီလပြဿနာအဖုံးဇာတ်လမ်းထဲမှာမြင်ကြပြီ 2006 to 2011 နှင့်ရှေ�သို့��ှ 2000 to 2005 အထည်အလိပ်စက်ပစ္စည်းတင်သွင်းတိုးတက်မှုနှုန်းအကြီးအကျယ်တစ်နှစ်အပေါ်တစ်နှစ်တိုးပွားလာခဲ့သည်.
အထည်အလိပ်စက်ယန္တရားကုန်ထုတ်လုပ်မှုထုတ်လုပ်မှုကွင်းဆက်တစ်ခုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သည်. ကဏ္ဍများတွင်အသုံးပြုအထည်အလိပ်စက်ပစ္စည်းများ၏အကွာအဝေးဖြစ်ပါသည်, ထိုကွောငျ့, ကြီးမားသော. ထက်ပိုပြီး 80 အကောက်အခွန်လိုင်းများအထည်အလိပ်စက်ယန္တရားများနှင့်ချည်မျှင်နှင့်အထည်နှင့်အဝတ်အစားထုတ်ကုန်များ၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတိုက်ရိုက်အသုံးပြုကြသည်ပေးသောအပိုပစ္စည်းများ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးကိုဖုံးလွှမ်း. ဒီကဏ္ဍမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတင်သွင်းမှုအပေါ်မှီခိုလျော့နောက်ဆုံးမှာ well.Price အဖြစ်ချည်မျှင်နှင့်အထည်နှင့်အဝတ်အစားထုတ်ကုန်ပေမယ့်စက်နှင့်အပိုပစ္စည်းများသာတင်ပို့ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြရန်တိုက်တွန်းခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ဘက်စုံအသစ်သောပစ္စည်းကိရိယာများဝယ်ယူမှုများအတွက်အဆုံးအဖြတ်အချက်များပါဝင်. ဒီအတိုင်းတော့, စျေးကွက်ကပိုထိရောက်စက်တွေပေါ်ပေါက်လာသကျသခေံဖြစ်ပါတယ်, ယှဉ်ပြိုင်မှုစျေးနှုန်းများမှာ, အဆိုပါအထည်အလိပ်စက်ယန္တရားစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်လျင်မြန်စွာနည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေမှကျေးဇူးတင်စကား. end-အသုံးပြုသူများသည် ပို. ပို. ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကုန်ကျစရိတ်မှာကာကှယျမှုရယူနိုင်တိုးမြှင်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်အတူပြည့်စုံအလိုအလျောက်ဖြေရှင်းချက်ရှာကြသည်.
လွန်ခဲ့သော : အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ